ပြည့်ဖြိုး (နည်းပညာမျှဝေခြင်း): Samsaung Galaxy Note2GT-N7100 ကို Root လုပ်နည်း + မြန်မာဖေါင့်ထည့်နည်း
Samsaung Galaxy Note2GT-N7100 ကို Root လုပ်နည်း + မြန်မာဖေါင့်ထည့်နည်း
ဖုန်းတွေကို Root လုပ်နည်းကိုတော့ ကျွန်တော့ရဲ့သင်ဆရာမြင်ဆရာလို့လည်းပြောလို့ရ
တဲ့ ကိုကျော် (၀င်ကမ္ဘာကျော်) ဆီကနေဘဲ အများဆုံး ပြန်လည်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုကျော်က
တော စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ရှင်းပြပေးနိုင်ပေမယ့် ကျွန်တော့်တော့ ပျင်းနေတာနဲ့ဘဲ မရှင်းပြဖြစ်ဘူး
ဗျ။ အခုတစ်ခေါက်လည်း ကိုကျော်တင်ပေးထားတဲ့ Samsaung Galaxy Note2GT-N7100 ကို Root လုပ်နည်း + မြန်မာဖေါင့်ထည့်နည်း ကိုအောက်မှာ ပုံနဲ့တကွအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ကဲ Samsaung Galaxy Note2GT-N7100 ဖုန်းလေးကို ကျနော်နဲ.အတူ Root လိုက်လုပ်ကြမယ်နော်။ Root လုပ်ရင်တော. Warranty ပျက်သွားပါတယ်။ဒါပေမယ်.လည်း ကျနော်ကတော. ကျနော်.ဖုန်းလေးကို crack application တွေထည့်ချင်တာကြောင့် Warranty အပျက်ခံပြီးတော့ Root လုပ်လိုက်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့လည်း Root လုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားရင် ကျနော်နဲ့အတူလိုက်လုပ်ကြရအောင်နော်။
Odin3 ကို Galaxy Note2 Root ဖိုင်ထဲမှာ တခါတည်းထည်.ပေးလိုက်တယ်။
လိုအပ်တာတွေဒေါင်းမယ်- Samsaung USB Driver or Samsaung Kies, GalaxyNote2Root
ဒေါင်းပြီးတဲ.ဖိုင်တွေကို Desktop ပေါ်မှာပဲ extraလုပ်ထားပါ။ Samsaung USB Driverကိုတော. PCမှာ Runထားပါ။
မိမိတို.ဖုန်းရဲ.Download Mode ထဲကိုဝင်နိုင်ဖို. Volume Down+Center Home+Power Buttonတွေကို တပြိုင်နက်တည်း တအောင်.လောက် ဖိနှိပ်ထားလိုက်ပါ။
အပေါ်ပုံကလို Warning ဆိုတဲ.စာသားလေးနဲ. စာတွေပေါ်လာပြီဆိုရင် Odin Mode ထဲကို ၀င်နိုင်ဖို.အတွက် Volume upကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဖုန်းကို USB Cableနဲ. PC နဲ.ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။
စောစောက Galaxy Note2 Root.Zip ကို extra လုပ်ထားတဲ. ဖိုင်တွေထဲက odin3 ဆိုတာလေးကို ဖွင်.လိုက်ပါ။ဖွင်.လိုက်ပြီးရင်တော. PDA ဆိုတာလေးကို တချက်ကလစ်လိုက်ပြီး cwm6-root-note2.tar
ထည်.ပြီးရင်တော. အောက်ကပုံမှာပြထားတဲ.အတိုင်း Start ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
အောက်ပါပုံအတိုင်း သူ.ဘာသာသူ installလုပ်နေပါလိမ်.မယ်။
USB Cableကို မဖြုတ်သေးပဲ reboot ပြန်တက်လာသည်အထိ ခဏစောင်.လိုက်ပါ။
ကဲ Reboot ပြန်တက်လာပြီဆိုရင်တော. မိမိဖုန်းလေးဟာ Superman ပုံစံ Super Userလေးနဲ. Root Access ရသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်ကနည်းအတိုင်း Root ရတာအဆင်မပြေရင် အောက်ကနည်းအတိုင်း ကြိုစားကြည့်နိုင်ပါတယ်.. မူရင်းအတိုင်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...အားလုံး လုပ်တတ်ကြမှာပါ...:)
Extract Odin3_v3.04.zip intoafolder on your computer. You will find the Odin3 v3.04.exefile together with other system files inside the folder.
Only unplug your phone from your PC after you see the “Pass” message in Odin.
Great job! You now successfully rooted your Samsung Galaxy Note2GT-N7100/GT-N7105.
Myanmar Font ထည့်သွင်းနည်း
NoteII မှာမြန်မာဖောင့်သွင်းနည်းလေးပါ။ လွယ်တော့လွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Android Version 4.1မှာ မြန်မာဖောင်.တွေမမှန်သေးပါဘူး။ Space ခြားရိုက်ရပါမယ်။ သွင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော. အောက်ပါနည်းအတိုင်းသွင်းနိုင်ပါမယ်။
FrozenKeyoard လေးကိုဒေါင်းပြီးဖုန်းထဲမှာ installလုပ်ထားပါ။
Setting>Language and inputထဲမှာ Frozen Keyboard ကိုအမှန်ခြစ်ပေးပါ။Default Keyboard ကို Frozen Keyboardကိုပဲရွေးပေးပါ။
Font Changerလေးကို မိမိတို.ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ပြီးဇော်ဂျီဖောင်.ပြောင်းရန် ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါ။
reboot ဖြစ်သွားပါလိမ်.မယ်။ ပြန်တက်လာရင်တော. မြန်မာဖောင်.မြင်နိုင်ပါပြီ။ဒါပေမယ်. တလွဲတွေတော.ဖြစ်နေမှာပါ။ အခြား Version တွေမှာဆိုရင်တော. ဒီနည်းကအဆင်ပြေပါတယ်။Jelly Beanမှာတော. အဆင်မပြေနိုင်သေးတာပါ။
Credit to: http://www.androidfreeapklover.com
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 7:09 PM